Enwere ike ịkpọ iPhone nke afọ a iPhone 6SE bụghị iPhone 7 | Akụkọ akụrụngwa
Afọ iPhone a nwere ike ịkpọ iPhone 6SE abụghị iPhone 7
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ n'ime anyị nọ ezumike, akụkọ metụtara iPhone na-esote na ụlọ ọrụ Cupertino ga-ebido n'afọ a anaghị akwụsị ịpụta. Akụkọ asịrị a kwuru na ọ bụ asịrị iPhone 7 agaghị abụ aha ngwaọrụ a ga-ewepụta na Septemba tinyere ụdị nke abụọ nke Apple Watch na MacBook Pro ọhụrụ nwere ihuenyo mmetụ OLED n'elu keyboard.
Dị ka ọ na-abụkarị ikpe n'ọtụtụ nkwụsị metụtara iPhone n'ọdịnihu, Apfelpage.de na-ekwuputa isi mmalite nke asụsụ China nke na-azọrọ na Apple na-n'ichepụta ihe iPhone, ma kama igosi iPhone 7 na-egosi iPhone 6SE. Akwụkwọ a enwebeghị ike ịnweta foto ọ bụla iji gosipụta ọhụụ ọhụrụ a.
Mana ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ihe nlereanya ọzọ dị ka ọnụọgụ niile ahụ ga-adị ka ụdị nke ugbu a, ọ bụ ihe ezi uche dị na Apple achọghị ịgbanwe nọmba mana gbakwunye leta E na njedebe nke ihe nlere a na - erezi ugbu a, yabụ ụdị ọzọ ga - abụ iPhone 6 pụrụ iche mbipụta. Ọ bụrụ n'ikpeazụ ka akpọrọ iPhone 6SE, atụmatụ ekwuru na Pro na ụfọdụ akwụkwọ China nwere leaked na izu ndị na-adịbeghị anya agaghị enwe isi.
Isi ihe dị iche iche dị mma na iPhone ọzọ ga - ewetara anyị ga - abụ, na - enweghị n'ikpeazụ ikwenye asịrị niile, a thinning nke ngwaọrụ, ebe ọ bụ na 3,5 mm jack ijikọ ekweisi ga-apụ n'anya kpamkpam, na-enye ohere iji nweta ohere ọzọ na kama iji ya tinyekwuo batrị, ihe ndị ọrụ na-achọ mgbe niile, Apple ga-eji ya belata nha ya.
Ekwenyesiri m ike na ịdị ugbu a nke ụdị ndị nnọchiteanya nke nnukwu ụlọ ọrụ dịka Samsung, Apple, Sony, LG ... ọ bụ naanị na ọ dị mkpa iji nwee ike iji ngwaọrụ ahụ nkasi obi na kama ịga n'ihu na-eme ka ha dị gịrịrị ma ị bulie ike batrị ma ọ bụ mee ka igwefoto ahụ ka mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Afọ iPhone a nwere ike ịkpọ iPhone 6SE abụghị iPhone 7
The OnePlus 3 nwere nkwado USB-OTG, mana ọ nwere nkwarụ
Ngwa 7 na-adọrọ mmasị nke ị ga-eji hazie ezumike gị ọzọ